भारतको अहिलेसम्मको रेकर्ड तोड्ने अक्षय कुमारको लक्ष्मी बम फिल्ममा आखिर के छ ? (हेर्नुहोस भिडियो) – Khabaarpati
भारतको अहिलेसम्मको रेकर्ड तोड्ने अक्षय कुमारको लक्ष्मी बम फिल्ममा आखिर के छ ? (हेर्नुहोस भिडियो)
October 10, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on भारतको अहिलेसम्मको रेकर्ड तोड्ने अक्षय कुमारको लक्ष्मी बम फिल्ममा आखिर के छ ? (हेर्नुहोस भिडियो)
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारका फ्यानहरुका लागि एकदमै खुःशीको खबर आएको छ । अक्षय कुमाचार चाँडै नै लक्ष्मी बम फिल्ममा देखा पर्ने छन् । अक्षयसँग लक्ष्मी बममा कियारा आडवाणी महत्वपूर्ण भूमिकामा देखिने पक्का भएको छ ।फिल्मको ट्रेलर ९ अक्टुबरमा रिलीज भएको छ । ट्रेलर रिलीज हुने बित्तिकै यो सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय भयो । यस ट्रेलरको रिलीजको २७ घण्टा भित्र ७ करोड भन्दा धेरै मानिसहरूले हेरिसकेका छन् ।
बलिउड सेलिब्रेटीहरूले पनि फ्यानहरूसँग लक्ष्मी बमको ट्रेलर मनपराएका छन् । टाप्सी पन्नू, कृति सनन भूमि पेडनेकर, करण जोहर, वरुण धवनलगायतका धेरै कलाकारले फिल्मको ट्रेलरको प्रशंसा गरेका छन् । लक्ष्मी बम तमिल फिल्म मुनि २ः कन्चनाको हिन्दी रीमेक हो। फिल्म डिस्ने प्लस हटस्टारमा ९ नोभेम्बरदेखि रिलीज हुँदैछ ।अक्षय कुमारको साथ लक्ष्मी बममा कियारा आडवाणी, तुषार कपूर, शरद केलकर र अश्विनी कलसेकर देखा पर्ने छन् । यो फिल्म राघव लरेन्स द्वारा निर्देशित गरिएको हो । यहाँ बाट हेर्नुहोस भिडियो
यिनै नायिकाको लागि आफ्नो घरबार बिगारेका रहेछन् आमिर खानले, दोस्रो पटक पनि घरबार बिगारेका आमिरलाई के भन्ने ?